Ndi Sheepadoodles umuaka kwesiri gi? - Reeddịrị
Ndi Sheepadoodles umuaka kwesiri gi?
Ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta mara mma nke nwere ọgụgụ isi na iguzosi ike n'ihe, mgbe ahụ ị nọ n'ụzọ ziri ezi! The Sheepadoodle na-bụ ikenyeneke mbiet ngwakọ - ekele maka ngwakọta zuru oke nke àgwà nne na nna ya.
Poodle mixes, dị ka Schnoodles , na-ewu ewu karị. Ha nwekwara anya ga - eme gị ịsị “Aww! Achọrọ m otu! ” Mana tupu ị nweta onwe gị anụ nkịta anụ ọhịa bekee, ka anyị mụta ihe Sheepadoodles bụ.
Gịnị bụ Atụrụ?
Ego ole ka Sheepadoodles ga-enweta?
She nwere Ezigbo anụ ụlọ dị mma maka gị na ezinụlọ gị?
Ego ole ka atụrụ na-efu?
Sheepadoodles vs. ụdị Doodle ndị ọzọ
Gini mere ị ga-eji chọọ Sheepadoodles?
Atụrụ atụrụ bụ obe n'etiti Ochie English Sheepdog na Poodle. Inweta oke kacha mma nke agwa nne na nna ha, nke a mmebe nkịta bụ ihe ịga nke ọma ozugbo! A mụrụ ụdị a dị ka nnwale na 60s nke ndị agha US ga-eji mee nkịta agha. Ha malitere ịpụta n'ọtụtụ ụlọ, na-eduga ụdị ngwakọ a na-ewu ewu na 2007.
Ebe ọ bụ na ha nọ hypoallergenic na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịwụfu, ha dị mma maka ndị na-arịa ọrịa nfụkasị ahụ. Uwe ha dị nro na nke gbara agba na-abụkarị nwa na ọcha na agba . Fọdụ nwere ike ịdị ọcha ma ọ bụ gbaa ọchịchịrị niile ma ọ bụ nwee ajị ajị agba ha, nke dị ụkọ. Ndị ọzọ nwere mmachi nke agba agba na anya abụọ ma ọ bụ anya abụọ, na-eme ka ha dị ka panda bea!
A na-akpọkwa a Sheepapoo , ụdị pooch a abụghị nke dị ọcha, ọ bụ ya mere ndị American Kennel Club (AKC) amataghị ya. Agbanyeghị, ọ bụ Dog Registry of America, Inc. na American Canines Hybrid Club ghọtara ya. Edere crossbreed a na International Designer Canine Registry (IDCR), kwa.
Lee anya na nne na nna Sheepadoodle
Shedị mkpụrụ ndụ dị egwu nke Sheepadoodles sitere na nne na nna ha dị ọcha, ha abụọ bụ ndị a ma ama dị ka anụ ụlọ ezinụlọ na nkịta na-arụ ọrụ.
Ochie English Sheepdog
Bụrụ na- ìgwè nkịta , ndị a buru ibu e kere eke nwere ike ìgwè ehi na nip ụmụaka. Nke a ekwesịghị ịbụ nsogbu mmalite mmekọrịta na ọzụzụ . Ha bụ 80% hypoallergenic ma wụfuo obere nkịta. Ha hụrụ nkasi obi nke obibi n'ime ụlọ ma bụrụ ndị na-eche nche dị ukwuu, mana ha anaghị eme ihe ike iji bụrụ ndị nkịta na-eche nche.
Ndị a ma ama maka igwuri egwu na igwu egwu ha, atụrụ na-eguzosi ike n'ihe ma na-agbanwe agbanwe na-eme ka ha bụrụ anụ ụlọ ezinụlọ!
Stereotyped dị ka elu-zoro, Poodles bụ otu n'ime ndị kasị nwee ọgụgụ isi nke ụdị nkịta niile. Ha dịkwa nnọọ egwuregwu na agile, na nkịta ndị a mara mma bụ ndị na-enweta mmiri dị ịtụnanya!
Ewezuga uwe mkpuchi ha nke hypoallergenic, ha bụ ndị ama ama maka ha mgbanwe na uche na mmetụta uche mmadụ .
Sheepadoodle na-abịa na nha dị iche iche, dabere na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke nne na nna ya na nha nke Poodle ejiri na crossbreeding.
N'agbanyeghị nha ya, ọtụtụ Sheepadoodles nwere a muscular, ọma proportional, na ike ahu .
Standardkpụrụ ọkọlọtọ ma ọ bụ nke ọkara Sheepadoodle nwere ike itu n'etiti 65 ka 85 lbs (30 ka 39 n'arọ) na-eto eto na ịdị elu nke 18 ruo 27 sentimita asatọ (46 ka 69 cm).
Dị ka nnukwu Sheepadoodle dị iche iche dị, na nkịta ndị a nwere ike ịdịkwu mma maka nnukwu ụlọ.
Obere ma ọ bụ Moyen Sheepadoodles
Obe onye anakpo Nwa aturu Bekee na obere Poodle, ma inwetakwu Sheepadoodle. Nkịta ndị a nwere ihe niile ị hụrụ n'anya gbasara Sheepadoodles na ahụ nke naanị ya dị arọ 35 ka 55 lbs (16 n'arọ ruo 25 n'arọ).
Uto ha na-akwụsịkarị n’agbata ọnwa asaa na ọnwa asatọ, n’oge nke ha bidoro ịgbakwunye ibu na úkwù ha.
Nwere ike nweta ụdị Sheepadoodle a site na ịgafe Obere Sheepadoodle ya na Toy Poodle. Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị ntakịrị aka nke micro-hybrid, nke na-adịkarị n'okpuru 35 n'arọ (16 n'arọ), ọ naghị agbanwe ọnọdụ ha na ịhụnanya nke ụmụ mmadụ.
Na-echegbu onwe gị banyere nha ndị a niile na-eche ma Sheepadoodle ha dabara maka ụlọ gị? Site na mgbanwe ndị a, ị nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ! Ihe ikwesiri ime bu dị njikere maka mmega ahụ ụfọdụ ya mere enyi gị furry nwere ike iji ike ya niile.
Lelee mara mma nwa nkịta Sheepadoodle:
’Re na-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta dị mma nke nwere agwa ahụ anaghị adịkarị ụja ma na-adịkarịkarị mmiri mmiri ! Sheepadoodles nwekwara eriri afọ buru ibu ma sie ike, nke na-eme ọzụzụ ite mfe-peasy.
Ma, dị ka ụdị ọ bụla ọzọ, dị mkpa iji chọpụta njirimara Sheepadoodle tupu ịzụta otu.
Kedu ka Sheepadoodles dị?
Imirikiti ndị nwe ha na-akọwa ụmụ nkịta Sheepadoodle ha dịka dị nwayọọ, na-egwuri egwu, ma nwee ọgụgụ isi . Ha bụ nkịta na-ahụ n'anya nke na-eme ezigbo anụ ụlọ, nke pụtara na ha anaghị eme nke ọma mgbe a hapụrụ naanị ha ogologo oge. Ha nwere omume enyi ma nwee obi ekele site n'aka ndị nwe ha ma ọ bụ ụmụaka.
Dị nnọọ ka nne na nna ha ochie Sheepdog, enwere ike na ha ga-enye ndị mmadụ mmiri na ìgwè atụrụ nta . Ikwesighi ichegbu onwe gi dika inwere ike ụgbọ oloko ma mee ka Sheepadoodle gị dị ka nkịta ma mee ka ọ ghọọ nkịta na-ahụ n'anya! E wezụga iso onye ọ bụla na-emekọrịta ihe nke ọma, ha na anụmanụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe nke ọma.
Ha obuna obi ojoo bụ isi ike ha, nke ha ji ụgwọ nne na nna ochie Bekee na Poodle. Nke a na-eguzosi ike n'ihe crossbreed hụrụ n'anya na-atọ ụtọ na ọ bụ ezigbo enyi. Na n’ihi na ha nọ amamiihe ma na-erube isi , ọzụzụ dị mfe, ọkachasị ma ọ bụrụ na ibido n’oge.
Otu esi edozi nwoke a mara mma
Atụrụ atụrụ wụsịrị obere na aji , nke dị mma maka ndị mmadụ na-arịa ọrịa nfụkasị ahụ. Fọdụ n'ime nkịta ndị a nwere ntutu dị larịị ma kwụ ọtọ, ebe ndị ọzọ nwere uwe mkpuchi mara mma.
Dowe ntutu ha n’ọnọdụ elu site na ihicha uwe ha ọ dịkarịa ala 2 ruo ugboro 3 n'izu . Mechie uwe ha Kwa izu 8 ruo 12 iji mee ka ọ jikwaa.
Echefula ihicha ma lelee ntị Sheepadoodle gị, ahịhịa ha ezé , na dobe mbọ mbọ ! Chọọ enyemaka maka ime ka Sheepadoodle gị dị ka nke kachasị mma ịchọta onye na-edozi ihe . Nye nkịta gị saa ahụ naanị mgbe ọ dị mkpa - mgbe ha na-egbutu ha bụ oge dị mma iji mee ya.
Gini bu ndu nke aturu?
N'ihi ngwakọ ngwakọ (nke pụtara na crossbreds nwere obere nsogbu ahụike karịa nne na nna ha dị ọcha), Sheepadoodles na-adịkarị mma. Ha nwere nkezi ndụ ndụ nke ihe dị ka 12 ruo 15 afọ , ya mere ha nwere ọtụtụ afọ iji soro gị na ezinụlọ gị nọrọ.
Agbanyeghị, ị ka ga-eleba anya maka ahụike ụfọdụ ha nwere ike keta.
Kasị nkịtị nsogbu ahụike:
Mgbu nke Gastric-Volvulus
Dị nnọọ ka ụmụ ọhụrụ, otu n'ime ụzọ iji jide n'aka na anụ ụlọ gị ga-etolite ahụike bụ inweta ha ọgwụ mgbochi ha chọrọ. Enwere ike ịgba ụmụ nkita ọgwụ mgbochi n’etiti izu asatọ ruo iri ma ekwesịrị inye ha nkwalite mgbe ọgwụ mgbochi mbụ ha gasịrị.
Udia fo Sheepadoodle ye akara enye munchies
.B. nri dị mma nwere ike inye aka na ogologo ndụ nwa gị furry. Ihe oriri nke Sheepadoodle kwesịrị inwe elu-edu kibble nke ruru ogo afọ nke doodle gị, ogo ya na ogo ọrụ gị.
Ngwakọta ndị a nwere ike ibute nsogbu na-agbari nri ma buru oke ibu. Kewaa ihe ị na-eri Sheepapoo pup nri gị n’ime nri anọ n’ụbọchị iji nye ya ohere ịgbari nri ya ma zere oke-mgbatị ahụ ya.
Ozugbo Sheepadoodle gị tozuru oke, ihe dị ka ọnwa isii na n'ihu, ịnwere ike belata nri ya Nri abụọ ruo atọ kwa ụbọchị . Okenye Sheepdog-Poodle mixes kwesịrị inye nri Iko 3 ruo 4 nke nri nkịta kacha akọrọ kwa ụbọchị. Na-eburu n'uche mgbe niile iji mee ka ọ dị mfe na mmiri mmiri na nri nri na-enweghị isi bụ ee-mba.
Mmezu mgbatị ahụ zuru oke nke na-echekwa
Na ha ịzụ anụ na ịchụ nta , ọ bụghị ihe ijuanya na Sheepadoodles bụ nọ n'ọrụ . Ha na-enwe igwu mmiri! Ọ ga-atọ ha ụtọ ịnụ ụtọ ịga njem na ọdọ mmiri, osimiri, ma ọ bụ osimiri. Ọ bụrụ na ị nwere ọdọ mmiri, Sheepapoo gị ga-eme nke ọma. Maka ịgagharị, otu ezigbo iwu bụ Ije ije 5-ije kwa ọnwa nke afọ ha .
Ha na-anụ ọkụ n'obi ịmụ ihe mgbe niile, ha na-ahụkwa ihe ịma aka n'anya, n'ihi mkpụrụ ndụ ihe nketa ha sitere na Poodles. Ya mere, wepụga mmega ahụ kwa ụbọchị, wepụta oge na-akuzi Doodle ohuru gi . Gwuo egwuregwu, nye iwu, na-eme ụfọdụ aghụghọ, ha ga-abụkwa anụ ụlọ ndị nwere afọ ojuju na ekele!
Cheta, dị ka ọ bụla ụdị, na-agbanwe agbanwe ụgwọ ọrụ dabeere na usoro, tinyere otuto ọnụ na ọgwụgwọ, bụ nke kachasị mma ọzụzụ ọzụzụ .
Ka ha na-aghọ ndị nkịta na-ewu ewu na-ewu ewu, Sheepadoodles bụ ìgwè na-achọsi ike, nke na-eme ha a ezi uche dị oke ọnụ nhọrọ maka anụ ụlọ. Ahịa dị iche iche dabere na ogo mkpụrụ ndụ nke ndị nne na nna. Echegbula; pedigrees agaghị abata n’egwuregwu dị ka AKC anaghị anabata eze a. Ga-ekpebi ụdị nha na àgwà ịchọrọ.
Ohaneze, A Sheepadoodle nwere ike na-eri n'etiti $ 900 ka $ 2,500 . Ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ agwa, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa. Nwere ike ịchọta ndị na-azụ Sheepadoodle n'ịntanetị. Lee ụfọdụ ndị na-azụ anụ ị nwere ike ịlele:
Deb si Doodles (Northern Virginia, Washington DC)
Atụrụ atụrụ site Kere (Arkansas)
N'ịnabata Nkịta Sheepadoodle
Nwee ndidi n'ihi na ọ bụghị ụlọ obibi niile nwere ngwakọ ndị a, mana buru n'uche na ọtụtụ Sheepadoodles gbahapụrụ chọrọ ezinụlọ na-ahụ n'anya na ezigbo ụlọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọsi ike inweta Sheepadoodle zuru oke, ịhọrọ ịzọpụta bụ ezigbo nhọrọ. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ nnapụta na US raara nye Sheepadoodles na Old English Sheepdogs dị ka New England Old English Sheepdog Nnapụta , Old English Sheepdog Nnapụta Network nke South East , na Midwest OES Nnapụta .
Na-emekọ ọrụ na iwu kwadoro mgbe niile mgbe ịzụrụ ma ọ bụ nakweere Sheepadoodle ma ọ bụ ụdị ọ bụla. Ewezuga ịlele ahụ ike Doodle, ndị mụrụ ya, na gburugburu ebe a na-azụlite, gbaa mbọ hụ na onye na-azụ ya nwere asambodo ma ọ bụ ikikere ịzụlite na ire ụmụ nkịta.
Ka anyị hụ otu Sheepadoodle si kwakọba atọ n'ime ngwakọta Poodle kachasị ewu ewu taa.
Obe nke a Nweta ọla edo na Poodle, Goldendoodles tụọ naanị 50 ka 65 n'arọ (23 ruo 30 n'arọ), na a kacha elu nke 23 sentimita asatọ (58 cm). Agba ha nwere ike ịbụ ọlaedo, ude ndị Irish, ọcha, ọbara ọbara, ma ọ bụ oji. Ndị a ngwakọ nwere ngwakọta nke Golden Retriever ogologo, ogologo ntutu na Poodle na-achagharị ntutu, n'ihi ya, a na-achọ mkpuchi ha mgbe niile.
Sheepadoodles na Goldendoodles bụcha nwere mmetụta, na-achọ ime ihe na-amasị ụmụ nkịta ezinụlọ .
Mmmmmmmmmmmm ( isi mmalite )
Fans nke a mbuaha ìgwè na-enweta ihe kasị mma nke atụmatụ nke Nnukwu Ugwu Bernese na Poodle. A makwaara dị ka Bernese Mountain Poo, ndị Bernedoodle bu na-eguzosi ike n'ihe, na-elekọta mmadụ, na-arụkwa ọrụ .
Dị ka Sheepadoodle, obe a na-abịa nha dị iche iche. Na Obere Bernedoodle dịrị gburugburu 18 ka 35 n'arọ (8 ka 16 n'arọ), Ọkara mbipute bụ banyere 35 ka 50 lbs (16 ruo 23 n'arọ), ebe ọkọlọtọ Bernedoodle nwere ike ịgafe 50 n'arọ (23 n'arọ na elu).
Agba ha sitere na oji na nke ocha, chọkọleti na ọcha, ọbara ọbara na ọcha, tan na oji, ka oji. Kootu ha bu wavy na mgbakọ , nke ndị nwe ụlọ na ndị ezinụlọ na-arụsi ọrụ ike ga-ahụ n'anya n'ihi na ọ na-achịkwa ya ma na-echefu obere.
Shepadoodle ( isi mmalite )
Aha ha fọrọ nke nta ka ha bụrụ otu, mana ịkwesighi ịmegharị Sheepadoodles na Shepadoodles. Nke ikpeazụ a bụ crossbreed ị ga - enweta mgbe ijikọta Poodle ọkọlọtọ na Onye Ọzụzụ Atụrụ German. Ha nwere ike itu si 50 ruo 90 pound (23 ruo 41 n'arọ), ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike ikpu akpịrịkpa ka Ogwe aka 125 (Kilogram 57)!
Dị ka ngwakọta Doodle ndị ọzọ, ọ dị mkpa ka a na-ehicha uwe Shepadoodle mgbe niile. Ọ bụrụ na ejighị ejiji n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nkịta ndị a nwere ike ahụhụ site na fleas .
Agbanyeghị na ị kwesịrị ịkpachara anya maka ndị na-azụ anụ ga-ekwu maka naanị izucha nke nkịta ha na-enye, kwenyere na Sheepadoodles bụ ihe ziri ezi nkịta ezinụlọ dị mma .
Ọ bụrụ na gị na ezinụlọ gị nwere ike ịrara oge gị na-elekọta nke a crossbreed, ị ga-enweta ihe mere ọtụtụ ndị ji hụ Sheepadoodles. Won’t gaghị akwa ụta maka ịnweta enyi na-eguzosi ike n'ihe, nke na-ahụ n'anya nke ahụ bụ ọgụgụ isi, ike, na hypoallergenic .
Have nwere ndụmọdụ ndị ọzọ maka ndị nwe ha chọrọ inweta crossbreed a? Ọ ga-amasị anyị ịnụ banyere ahụmịhe gị na Sheepadoodle, yabụ hapụ ikwu!
14 Nkịta Dog Na-ekwu Okwu: Ihe I Kwesịrị Knowmara Tupu ingnata Nkịta
nkịta na -afụ ụfụ nke ukwuu
ole ka chiahua nwere ogologo ntutu
nkezi ọnụ maka French bulldog